डिजाइगुलले आफ्नो लोगो परिवर्तन गर्दछ यसलाई पूरै घुमाउनको लागि क्रिएटिव अनलाइन
डिजाइगुलले हिम्मत गर्यो कि अरू ब्रान्डले के गर्दैन: तपाईंको लोगोलाई पूर्ण मोड दिनुहोस्। त्यो हो, यसले वास्तवमा यसलाई परिवर्तन गरेको छ र ब्रान्ड थाहा नहुनेहरूको लागि, जुन थोरै हुनेछ, यो यो हो कि तपाई उनीहरूसँग अर्को भाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ।
तिनीहरूले के प्रयास गर्छन् त्यो देखाउन तपाईले बिभिन्न कुराहरु हेर्नु पर्छ र अर्को परिप्रेक्ष्यमा खोजी गर्नुहोस्। मौसममा झर्ने सबै कुराको साथ, गम्भीर समस्यासँग डिलिन अर्को दृष्टिकोणबाट चीजहरू देख्ने उत्तम तरिका के हो?
को समाधान पक्कै फरक हुनेछ र हाम्रो आफ्नै स्थितिबाट हामी यसलाई अवलोकन गर्न सक्षम छैनौं, त्यसैले डिजाइगुअल लोगोको मोडमा हेरेर, सायद समझदारी र जोखिमको एक विन्डो खुल्दछ।
परिवर्तनहरू सबैभन्दा सहज अवस्थाबाट कहिल्यै लिइएको थिएन। तपाईंले जोखिम उठाउनु पर्छ र यो डिजाइगुलले गरेको छ तपाईंको नयाँ लोगोको साथ। यसको खोजी भनेको सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु हो, यदि उनीहरूलाई यो खबर थाहा छैन भने के भयो भनेर आश्चर्यचकित हुनेछ वा यदि स्टोरको नाम परिवर्तन गरिएको छ वा, यो डिजाईगुल हो?
हो, हो, राम्ररी हेर्नुहोस्, यो अन्य तरिकाको वरिपरि हो, एक अर्कोलाई भन्नेछ। यसको कारण विशाल परिवर्तन ब्रान्डको th 35 औं वार्षिकोत्सव हो र यो एक ब्रान्डको लागि पनि चित्रित गरिएको छैन जुन फेसनमा पूर्वानुमानित भन्दा वा संसारभरिका लाखौं व्यक्तिको दैनिक पोशाकमा प्रचलित भन्दा धेरै फरक तरिकाले चीजहरू कोशिस गरेको छ।
यो परिवर्तनको लागि प्रयोग गरिएको आदर्श वाक्य हो: "सुसंगत असंगत"। र सत्य यो हो कि यो जुन यो कपडाको ब्रान्ड हो र भएको सबैसँग राम्रोसँग फिट हुन्छ। वास्तवमा, तिनीहरू पनि पेरेटले १ 1986 XNUMX मा डिजाइन गरेका नग्न दम्पतीको साथ आफ्नो सारमा फर्केका छन्।
तपाईलाई पहिले नै थाहा छ, अर्को दृष्टिकोणबाट चीजहरू हेर्न। आफ्नो सुविधा क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनुहोस्। हामी पनि हराउँदैनौं मोजिला लोगोमा परिवर्तन.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » सबै एक स्पिन दिनुहोस्, यो Ragged वा हाँसे भने पनि
300 शब्दहरूमा एफिनिटी प्रकाशक: तपाईंसँग सम्पादकीय सजावटको लागि चाहिने सबै कुरा छ